Maitiro ekuisa alarm yekunyarara pane yako Apple Tarisa | IPhone nhau
Maitiro ekuisa alarm yekunyarara pane yako Apple Watch
Mudzimai wangu ane hunhu hwakawanda, asi iye zvakare ane zvimwe zvidiki zvidiki. Zviripachena, hapana munhu akakwana. Uye imwe yeaya "zvikanganiso" mu firmware yako ndeyekuti une nzeve inoteerera. Uye kune zvakawanda zvidzoreso zvandakaita kare, hapana nzira yekuzvigadzirisa.
Sezvinei Ndine mukana wekuisa yangu Apple Watch mune yakanyarara mode. Nenzira iyi ndinogona kuenderera mberi nekuona maaramu uye yambiro yekunyevera chinyararire, ndichingoshandisa vibration, uye nekudaro ndichidzivirira wachi yangu kubva pakubhururuka nepahwindo neSvondo masikati panguva yekurara.
Pakati pemazhinji emabasa uye marongero ane iyo Apple Watch, pane imwe isinganyatso kuzivikanwa asi yakakosha kurema kwayo mugoridhe. Ndizvo chinyararire modhi. Saka wachi yako inoshandisa kudedera pane kurira painenge ichida kukuzivisa iwe kune chimwe chinhu.
Kunyangwe iwe uri kubasa kana kumba (kunze kwekunge iwe uchishanda mumugwagwa mukuru, kana kugara wega), nzira yakanyarara inogona kukubatsira kuti ugare uchikurukura neako Apple Watch. pasina kukanganisa vanhu vakakukomberedza.
Gadza alarm chete
Kana iwe ukaita yakanyarara modhi, iwe unoramba uchisangana neako Apple Tarisa chete nekudedera, pasina ruzha.
Zviri nyore kwazvo. Zvese iwe zvunofanirwa kuita ndeye iseta zvakajairika, woisa yako Apple Watch mune yakanyarara modhi.
Kuti uite izvi, neyakajairwa skrini yewachi kumeso, tsvedza chigunwe chako kumusoro, uye batidza tsvuku bhero icon. Saka yako Apple Watch ichave iri yakanyarara mode.
Nenzira iyi, zvese maalarm uye notices dzinozunguzika pane kurira. Kana iwe zvakare uchida kudzima vibrations kuti uzvinyaradze zvachose, saka izvo zvaunofanirwa kumisikidza ndizvo usavhiringidze maitiro, nekukanda icon yekrescent (maitiro emanheru). Ndiwo musiyano uripo pakati pe "kunyarara" uye "usavhiringidze" maitiro, kuti imwe inodedera, uye imwe haina.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuisa alarm yekunyarara pane yako Apple Watch
Kana pachinzvimbo chekuti "mukadzi wangu", iwe wanga wataura nezve "mumwe wangu", ungadai wakave wakanaka kwazvo. Nenzira iyi, ndinofunga isu tese tinoziva kuti zvakazoitika sei.
Kana vakaroora, mukadzi wake
Kana iwe uchida kuiverenga neimwe nzira, idambudziko rako
Iyo poindi ndeyekuti iye anozvidza vakadzi nekumubata se "asina kukwana" uye nekumuenzanisa nemuchina. Kana iwe usingakwanise kuverenga izvo, une dambudziko rakafanana.
IOS 14.5 Beta 1 inobvumidza iwe kuvhura yako iPhone ne mask kana iwe ukapfeka iyo Apple Watch
Apple inoburitsa yekutanga betas yeIOS 14.5, iPadOS 14.5, watchOS 7.4 uye tvOS 14.5 yevagadziri